Ubungakanani beesentimitha ezingama-32 ii-intshi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
I-32 isikrini se-diagonal ngaphakathi. Zingaphi iisentimitha?
Yeyona diagonal ekhaya ukuba umabonwakude angamashumi asibhozo eesentimitha.
Xa uthenga esitolo, i-intshi ezingama-32 zabhalwa, kwaye ukuba iphindaphindwe nge-intshi (2.54), ke loo nto iya kuvela.
Ngelixa le fomati ifanelana nam, ndibone ngathi ibonakala ibangcono ngokungathandabuzekiyo.
Ke masizame ukufumanisa ukuba:
I-intshi enye ziisentimitha ezi-1
phinda u-2,54 nge-intshi ezingama-32, sifumana iisentimitha ezingama-81
Ke, impendulo echanekileyo yombuzo "zingaphi iisentimitha ezi-intshi ezingama-32"; izakuba ziisentimitha ezingama-81. Lo mgangatho wobude awulungelanga kuthi kwaye usetyenziswa ikakhulu kumazwe aseNtshona naseMelika.
Ukuba i-intshi enye kudala ilingana neesentimitha ezi-1, akukho nzima ukubala oko
I-intshi ezingama-32 (i-diagonal yesikrini sakho) iqulethe (32 * 2,54), iisentimitha eziyi-81,28 ...
Kodwa ngenxa yesizathu esithile wonke umntu usika iinombolo emva kwentloko, aze abhale -
Ukuba kubaluleke kakhulu ukwazi ubungakanani be-diagonal yesikrini seTV nge-intshi ezingama-32 ngeesentimitha, ke udinga amaxesha angama-32 ukuya ku-2,5 (ixabiso elichanekileyo ngu-2,54), kuvela amasentimitha angama-80.
Kumabonakude onomlinganiso we-16: 9 uya kuba ziisentimitha ezingama-71 ububanzi kunye nama-40 eesentimitha ukuphakama.
I-intshi linyathelo lesiNgesi lomgama osetyenziswa kwilizwe labo ukuza kuthi ga ngoku. I-intshi enye iphantse ibe ziisentimitha ezimbini ezinesiqingatha (2,54) okanye ubude bezipikili zepenix yomunwe oyindoda. Ngokusekwe kule intshi ama-32 alingana 81 cm (81,3)
intshi ngumda wasentshona wobude osetyenziswa kumazwe amaninzi. kwaye ukusukela IiTV nazo zihlanganisana phesheya, emva koko ubukhulu besikere bunikezelwa kwii-intshi zabo zemveli. ukuba sithetha ngeesentimitha eziqhelekileyo, emva koko I-intshi ezingama-32 iisentimitha eziyi-81 I-diagonal kwiscreen.
I-intshi enye ngu-1 cm.
Ukuba uphinda-iisentimitha ezingama-32, kuvela i-81 cm.
Nantsi i-diagonal yesikrini kwaye iya kuba yi-81 cm.
Esi ayisosibonisi esikhulu kunazo zonke kwixesha lethu, endaweni yoko sisiphambuka, esisuka kumbono singonakalisi kakhulu, apho umgangatho womfanekiso uphezulu kwaye uyasebenza.
Isikrini esizi-32-intshi ziisentimitha ezingama-81,28 ...
ukuphakama kwesikrini - ii-intshi ezi-15,69 okanye iisentimitha ezingama-39,85, ububanzi - i-intshi eziyi-27,89 okanye iisentimitha ezingama-70,84 ...
ukuphakama - 19,2 i-intshi okanye iisentimitha ezingama-48,77, ububanzi - 25,6 inches okanye iisentimitha ezingama-65,02 ...
I-intshi enye ziisentimitha ezi-2,54. Ukubala i-diagonal yesikrini kwisentimitha, kufuneka uphindaphinde inani nge-intshi nge-2,54 kwaye ufumane i-diagonal cm. Kwimeko yethu, i-32 iphindaphindwe nge-2,54 kwaye ifumane i-diagonal ye-81,2 yeesentimitha.
Ubungakanani bescreen bulinganiswa ngendlela efanelekileyo kumgama wesiNgesi wobude obuzi-intshi. I-intshi enye ilingana neesentimitha ezi-1, okanye njengoko ilinganiswe ngaphambi komnwe omnye we-phalanx (jonga umfanekiso). Ngokusekwe koku, siphindaphinda i-intshi ezingama-2,54 nge-1 kwaye sifumane iisentimitha eziyi-32. Oko kukuthi, i-diagonal yee-intshi ezingama-2,54 imalunga (kuba abavelisi banokuphambuka kancinci) iisentimitha ezingama-81,28.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,322.